Wayne Mark Rooney (wuxuu dhashay 24 October 1985) waa ciyaaryahan xirfadle ah oo Ingiriis ah kaasoo u ciyaara kooxda Major League Soccer ee Mareykanka. Waxa uu ciyaaray kubad badan oo kubada cagta ah, waxaana sidoo kale loo isticmaalay boosaska khadka dhexe ee kala duwan. Waa gooldhaliyaha ugu goolasha badan xulka qaranka England iyo Manchester United. Heerka Naadiga, wuxuu ku guuleystay abaalmarin kasta oo uu ku heli karo Ingiriis, Europe iyo Continental Football, marka laga reebo European Super Cup. Michael Carrick, waa ciyaaryahanka keliya ee Ingiriis ah ee ku guuleystay Premier League, FA Cup, UEFA Champions League, League Cup, UEFA Europa League iyo FIFA Club World Cup.
Rooney ayaa ku biiray kooxda da'yarta Everton isagoo 9 jir ah, wuxuuna kulankiisii ​​ugu horeysay u saftay kooxda 2002dii isagoo da'diisu ahayd 16 jir. Waxa uu labo xilli ciyaareed ku qaatay kooxda Merseyside ka hor inta uusan u dhaqaaqin Manchester United 25.6 milyan ginni xagaagii 2004. daaqada suuqa. Waxa uu ku guuleystay 16 koob oo uu la qaaday kooxda, shan kamid ah Premier League, FA Cup iyo Champions League 2008. Waxa uu 253 gool u dhaliyay United tartamada oo dhan si uu u noqdo ciyaaryahanka ugu goolasha badan taariikhda, 183 gool oo Premier League ah ayaana ah goolasha ugu badan ee uu u dhaliyay ciyaaryahan kasta oo hal koox ah. Rooney oo 208 gool u dhaliyay Premier League ayaa ka dhigay goolkiisii ​​labaad ee ugu goolasha badan Premier League xilli ciyaareedkan oo dhan kaliya hal gool oo uu ka dhaliyay Alan Shearer. Waxa uu sidoo kale heystaa kaalinta sadexaad ee ugu sareeya Premier League, isagoo leh 103.
Rooney ayaa kulankiisii ​​ugu horeysay u saftay xulka England bishii February 2003, isagoo da'diisu ahayd 17 jir, wuxuuna noqday ciyaaryahankii ugu da'da yaraa ee u matalaa England (rikoorka tan iyo markii uu jabiyay Theo Walcott), waana ciyaaryahanka ugu goolasha badan England. Waxa uu u ciyaaray Euro 2004, waxaana uu dhaliyay afar gool, isagoo gabi ahaanba noqday ciyaaryahanka ugu da'da yar taariikhda Koobka Yurub. Wayne Rooney ayaa tan iyo markii uu kasoo muuqday 2006, 2010 iyo 2014 Koobka Adduunka, waxaana loo arkaa inuu yahay ciyaaryahanka ugu fiican wadankiisa. Wuxuu ku guuleystey abaalmarinta xiddiga sannadka ee England sannadkii afar jeer, isagoo ku guuleestay 200.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Wayne_Rooney&oldid=223190"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 4 Nofeembar 2021, marka ee eheed 21:54.